Taariikh Nololeedka Atooraha Ugu Shacbiyada Balaaran Gudaha Hindiya Salman Khan Xaqiiqo Iyo Xan Wixii Laga Qoreyba Oo Update Ah (+Sawiro) – Filimside.net
Taariikhda: December 27, 2018
Kulanti wanaagsan akhristayaashena kuna soo dhawaada barnaamijkii taariikha xidigaha caanka ah
waxaana maanta madasha iska leh Mega Star Salman Khan kaaso maanta u dabaal dagaya dhalashadiisa 53aad oona ah atooraha ugu shacbiyada balaaran gudaha Hindiya sidoo kalena guusha saaxiib la ah weliba filimkiisa Blockbuster waxaan ahayna ma noqdo dhawaanahan inta ugu badan.
Hadaba Salman Bhai waa atoore miisaan culus ku leh Bollywood-ka laguna tilmaamo shaqsi awood ahaan aan loo dhawaan karin, fadlan hoos kaga bogo macluumaadka Super Star-kan oo dhameestiran:
Gogol Dhiga Salman Khan Xogtiisa Xiisaha Badan:
Abdul Rashid Salim Salman Khan oo ku caan baxay Salman Khan waa atoore Hindi ah, filimada qarash gareeye sidoo kalena sameeyo barnaamijyada TV-yada ka baxaan.
Inta badan Xidigan saxaafada waxay ugu yeertaa “The Tiger of Bollywood”, “Blockbuster Khan”, “Boxoffice King”, sidoo kale wuxuu caan ku yahay “Bhaijaan” iyo “Sallu” oo ay taageerayaashiisa ugu yeeraan.
Shabakada CNN waxay Salman Khan ku tilmaantay inuu ka mid yahay xidigaha aduunka ugu awooda badan “One of the World’s Biggest Stars”
Salman wuxuu shacbiyad balaaran ku leeyahay guud ahaan qaarada Asia iyo Hindida Diyasbarada ee daafaha caalamka ku kala nool.
Sallu saxaafada waxay ku tilmaantaa inuu yahay shaqsiga ugu caansan, ugu saameynta balaaran ugu guulaha badan taariikhdka fanka Hindiya.
Sidaa darteed miisaanka iyo muga uu Salman leeyahay marka laga yaabay waxay dawlada Hindiya siisay abaal marinta Rajiv Gandhi sanadii 2008 maadaama uu fanka guulo taariikhi ah ka gaaray sidoo kalena uu dad badan Bollywood-ka uga faa’iideeyay dhan walbo.
Khan si joogto ah wuxuu kaga dhex muuqdaa dhaqamada Hindiya marka laga hadlaayo dadka ugu saameynta balaaran gudaha Hindiya meel walbo oo ay daafaha caalamka ku nool yihiin, midaasna waxaa ka marag ah sanadkan markii uu madaxweyne Barack Obama Hindiya yimid waxaa ka shacbiyad badiyay Salman Khan madaama Salman uu noqday shaqsiga loogu jecel yahay asigoo ka afti badiyay madaxweyna Obama iyo Ra’iisul wasaaraha Hindiya Nerandra Modi!
Salman waxa uu ku dhashay magaalada Indore gobolka Madhya Pradesh ee India wuxuuna xidigan dhashay 27 December sanadii 1965.
49-jirkan waa curudka filim qoraaga caanka ah Salim Khan halka hooyadiis lagu magacaabo Sushila Charak balse markii dambe waxay la baxday magaca Salma Khan.
Salman awoowayaashiisa dhanka aabaha waxay kasoo jeedaan asal ahaan qowmiyada Pashtun ee dalka Afghanistan waxayna usoo guureen magaalada Indhore ee gobolka Madhya Pradesh, Hindiya.
Khan hooyadiis waa Hindu halka aabaheed Baldev Singh Charak uu kasoo jeedo Jammu-Kashmir balse Salman hooyadiis gobolka Maharashtra ayay kusoo bar baartay.
Madaama Salman aabihiis uu Mulsim yahay sidoo kalena hooyadiis ay Hindu tahay xidigan wuxuu si rasmi ah dadka hortooda iyo saxaafada kaga sheegaa inuu labada diimood isku heesto Hinduna uu yahay sidoo kalena Muslim uu yahay.
Salman eedadiis aabihiis qabo Helan waa atirisho aflaanta wax ka jili jirtay 70-kii iyo 80-kii sidoo kalena Khan waxaa la dhasheen labo walaalo oo isaga ka yar Arbaaz Khan iyo Sohail Khan.
Sidoo kalena Salman waxaa la dhasheen labo gabdhood oo kala ah Alvira Khan iyo Arpita khan weliba Arpita aabihiis ayaa soo korsoday sidoo kalena sharciga hortiisa ku saxiixay inay gabdhiisa tahay laakiin ma uusan dhalin Salman aabihiis.
Salman bilawgii waxbarashadiisii wuxuu ku hana qaaday Scindia School ee ku yaalo xaafada Gwalior asigo walaalkiis Arbaaz ayaa sanado kooban wax ka barteen halkaas.
Kadib waxbarashadiisa sare wuxuu ku dhameestay St. Stanislaus High School ee ku yaalo xafaada Bandra ee magaalada Mumbai, kadib wuxuu usii gudbay dhanka College-ka asigoo galay Elphinstone College balse kuma waarin sanadkiisii labaad markii uu ahaa ayuu waxbrashada isaga tagay.
Salman Khan Iyo Sida Uu Fanka Kusoo Galay Iyo Wacdarihii Uu Dhigay (1988 – 93)
Bhai wuxuu fanka kusoo biiray sanadii 1988 asigoo door caawiye ka qaatay filimkii Biwi Ho To Aisi weliba codkiisa kuma hadleyn filimkan oo qof kale ayaa u duubay.
Laakiin filimkii lagu bartay sidoo kalena dhalinta Hindiya ku jeclaadeen wuxuu ahaa Maine Pyar Kiya (1989) waxaana filimkan sameeyay Sooraj Bartajya.
Salman waji cusub ayuu Bollywood-ka u bilaabay madaama filimada dagaalka oo kaliya gudaha Hindiya laga xiiseyn jiray.
Balse Maine Pyar Kiya ayaa noqday filim dhalinta iyo qoysaska ay ka helaan kaasi oo ka dhigtay inuu filim guul taariikhi ah gaaro sidoo kalena dib loo bilaabo sameynta filimada jeceylka ah
Salman wuu ku tartamay filimkii Maine Pyar Kiya (1989) abaal marinta atooraha ugu wanaagsan ee shirkada Filmfare bixiso balse abaal marinta atooraha Bollywood-ka ku cusub sanad walbo la siiyo si la yaab leh waxay Filmfare ku siisay Sooraj Bartajya oo Maine Pyar Kiya sameeyay!
Kadib Maine Pyar Kiya wuxuu noqday filim caalami ah asigoo luqado badan lagu codeeyay sida Ingiriis, Spanish, Telugu iyo Tamil dhamaan luqadihii filimkan lagu codeeyay markii suuqyada kala duwan la saaray iskoor taariikhi ah ayuu sameeyay.
Salman si fudud ayuu Super Star weyn ku noqday sidoo kalena shacbiyad balaaran ayuu gudaha Hindiya ku yeeshay xidigan sanadii 1990 wuxuu la yimid filimkii Baaghi: A Rebel for Love kaasi oo guul weyn gaaray.
Sanadii 1991 Khan wuxuu noqday atoore aflaan badan la yimid weliba sedexdii filim ee uu la yimid wajigii kowaad ee 1991 Patthar Ke Phool, Sanam Bewafa iyo Kurbaan waxay noqdeen aflaan guulo waa weyn iyo mid dhex dhexaad ah gaareen.
Laakiin qaybtii labaad ee 1991 wuxuu Salman marnaba iloobi karin in filimkii Saajan ee uu la jilay Sanjay Dutt iyo Madhuri Dixit inuu Super Hit weyn noqday sidoo kalena noqday filimkii ugu weynaa sanadii 1991.
Salman Khan madaxa dhulka wuu ka ceshan waayay sanadihii 1992 iyo 1993 madaama aflaantii uu xidigan sameeyay badankooda dhulka galeen sheeko ahaan iyo ganacsi ahaan waxaana ka mid ah Suryavanshi (1992), Jaagruti (1992), Dil Tera Aashiq (1993) iyo kuwo kale
Salman guusha macaankeeda wey u hormartay ayay saxaafada qaar hadal hees ka dhigteen madaama uu labo sano dhiigo dhex galay sidoo kalena cadaadis ayaa wiilkan soo wajahay.
Salman Markii Uu La Yimid Filimkii Caalamka Laga Soo Dhaweeyay Hum Aapke Hain Koun Iyo Markii Uu Maqaamkiisii Cirka Galay (1994 – 99)
Hum Aapke Hain Koun waxaa sameeyay Salman saaxiibkiis Sooraj Bartajya waxaana la jishay Madhuri Dixit weliba filimkan gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka marka la isku daro wuxu kasoo xareeyay 135 Crore ($20M).
Shabakada Boxoffice India waxay filimka Hum Aapke Hain Koun ku tilmaantay “Biggest Blockbusters Ever in Hindi Cinema” madaama filimkan uu dhigay rikooro taariikhi ah weliba filimkan oo masraxa saaran ayaa la dhisay tiyaataro dheeri ah si dalabka dadweynaha looga jawaabo.
Salman wuxuu noqday Super Star weyn oo aan loo dhawaan karin kadib guushii taariikhiga ahayd ee filimkiisii Hum Aapke Hain Koun sidaa darteed horaantii sanadii 1995 wuxuu la yimid filimkii Karan Arjun oo ay wada jileen isaga iyo SRK.
Karan Arjun wuxuu noqday Blockbuster weyn sidoo kalena Salman amaan iyo mudnaan ayuu ku helay taasi oo u suura galisay inuu abaaal marinta Filmfare Awards qaybta atooraha ugu wanaagsan uu ku tartamo
Khan wuxuu bilaabay sanadihii xigay inuu yareeyo sameynta filimadii sidoo kalena sanad walbo uu labo filim la imaado sidaa darteed sanadii 1996 wuxuu sameeyay filimkii Khamoshi ee Sanjay Leela Bhansali iska lahaa filimkan gudaha Hindiya wuu ka guul dareestay balse daafaha caalamka guul weyn ayuu ka gaaray.
Isla sanadii 1996 Salman wuxuu la yimid filimkii Jeet ee uu Sunny Deol iyo Karishma Kapoor la jilay filimkan Super Hit weyn ayuu noqday sidoo kalena sheeko ahaan siweyn ayaa loo jecleestay
Salman Khan qorshihii 1996 ayuu dib ula soo laabtay isla sanadii 1997 wuxuuna sameeyay labo filim oo kala ahaayeen Judwaa iyo Auzaar. Xidigan filimkii Judwaa ayaa Hit dhameestiran u noqday madaama uu filim shactiro ahaa sidoo kalena uu si wacan kaga baxsaday balse Auzaar wuxuu noqday filim guul dareestay ganacsi ahaan.
Super Salman sanadii 1998 ayuu Boxoffice-ka gil gilay sidoo kalena hadal heynta Bollywood-ka isaga ayaa qaatay madaama uu sameeyay 4-filim waana arin aan looga baranin.
Filimkii Kajol uu la sameeyay Pyaar Kiya To Darna Kya (1998) wuxuu noqday Super Hit sidoo kalena aflaanta guulaha waa weyn gaareen ayuu sanadii 1998 ka mid noqday.
Kadib Bhai waxaa u xigay filimkiisii guusha dhex dhexaadka ah gaaray Jab Pyaar Kisise Hota Hai balse isaga ayaa siweyn shacab weynaha ugu soo jiitay qaab jilinkiisii.
Sidoo kalena filimkiisii Bandhan Hit dhameestiran ayuu noqday inkastoo filimkan uu ahaa mid soo daahay hadana Salman wajigiisa ayuu ku gadmay.
Salman filimkii Kuch Kuch Hota Hai ee SRK iyo Kajol hogaamiyaha ka ahaayeen ayuu muuqaal marti ah ku yeeshay filimkan All Time Blockbuster-ka noqday Salman wuxuu ku qaatay abaal marinta atoore caawiyaha ee shirkada Filmfare bixiso madaama daqiiqadaha kooban ee uu filimkan ku lahaa siweyn saameyn ugu yeeshay.
Salman suuqiisa iyo sicirka uu filimada ku sameeyo ayaa cirka galeen midaasna waxay sababtay in sanadii 1999 uu xidigan la imaado 5-filim oo sheeko ahaan iyo fariin ahaan aad u kala duwan.
Salman filimkiisii ugu horeeyay wuxuu ahaa Jaanam Samjha Karo sanadii 1999 balse filimkan wuu guul dareestay inkastoo asiga iyo Urmila ay si wacan iskula jileen heesihiisa ay aad u fiicnaayeen.
Laakiin filimadiisii Biwi No.1 (Super Hit), Hum Dil De Chuke Sanam (Hit) iyo Hum Saath Saath Hain (Blockbuster) ayaa u suura galiyeen inuu noqdo atooraha ugu awooda badan Bollywood-ka sanadii 1999.
Khan filimkiisii Hum Dil De Chuke Sanam oo ay Ajay Devgan iyo Aishwarya Rai isla jileen wuxuu ku muteestay in abaal marinta Filmfare qaybta atooraha ugu wanaagsan uu ku tartamo bandhigiisii xiisaha badnaa.
Salman Khan Hoos U Dhicii Asiibay Bilawgii Qarnigan Iyo Sida Uu Magaciisa Marwalbo U Jiray (2000 – 2004)
Bilawgii qarnigan Super Star Salman dadka isaga taageero iyo kuwa filimadiisa falan qeeyo dhaliil xoogan ayay usoo jeediyeen madaama uu qaatay sheekooyin uusan u qalmin kuwaas oo sababeen inuu hoos u dhac sameeyo xidigan.
Salman waji wanaagsan ayuu ku bilaabay sanadii 2000 madaama filimkiisii Dulhan Hum Le Jayenge ee Karishma Kapoor la jishay uu Hit weyn noqday sidoo kalena aad looga helay.
Laakiin filimkiisii lagu hanka weynaa Har Dil Jo Pyar Karega guul dhex dhexaad ah ayuu gaaray halka labadiisii filim ee kale Kahin Pyaar Na Ho Jaaye iyo Chal Mere Bhai ay dhulka galeen mana ahayn arin xidigan laga filaayay.
Salman sanadii 2001 liifada ayuu gaabsaday kaliya hal filim ayuu la yimid Chori Chori Chupke Chupke oo ay Rani iyo Preity Zinta la jileen wuxuuna filimkan noqday Semi Hit asigoo guul dhex dhexaad ah gaaray.
Sanadii 2002 waji wanaagsan Bhia kuma bilaabin madaama filimkiisii kowaad Tumko Na Bhool Paayenge uu guul dareestay balse waxaa lala yaabay filimkii Hum Tumhare Hain Sanam oo ay SRK iyo Madhuri isla jileen inuu guuleestay inkastoo filimkan uu qadiimi ahaa lana sameeyay lix sano ka hor xiligii la daawaday.
Super Salman sanadii 2003 ayuu dib usoo laba kacleeyay amaan iyo guusha Boxoffice-ka ayuu dib u helay madaama filimkiisii Tere Naam uu kusoo bandhigay jiliin taariikhi ah kuna muteestay inuu u tartamo abaal marinta Filmfare qaybta atooraha ugu wanaagsan sidoo kalena filimkan guul ayuu gaaray.
Sidoo kalena filimkii Baghban ee uu Amitabh iyo Hema Malini la jilay Hit weyn ayuu noqday weliba Salman muuqaalada uu filimkan ku leeyahay inkastoo ay koobnaayeen hadana nuxurka iyo hal bawlaha Baghban isaga ayuu ahaa.
Salman markale sanadii 2004 wuxuu sameeyay 4-filim ee uu door dhameestiran ku lahaa marka laga reebo filimkiisii Mujhse Shaadi Karogi oo Hit noqday inta kale wey guul dareesteen balse filimkiisii Garv – Pride & Honour ee isagana guul dareestay wuxuu ku helay amaan balaaran sida uu doorkiisii Action-ka ahaa kaga baxsaday.
Bhai Iyo Culeeskii Saarnaa Oo Kusii Laba Jibaarmay Iyo Sida Uu U Xamilay (2005 – 2008)
Khan nasiib wanaag sanadii 2005 wuxuu sameeyay filimkii ugu weynaa Bollywood-ka No Entry wuxuuna ahaa filim shactiro wuxuuna noqday Super Hit sidoo kalena filimkiis labaad ee shactirada ahaa Maine Pyaar Kyun Kiya? Isagana guul ayuu gaaray wuxuuna noqday Semi Hit.
Laakiin Salman guulaha uu gaaray waxaa ka badnaa qasaarada soo gaartay dhanka Boxoffice-ka iyo sheeko ahaan in filimadiisa ay dadka wax falanqeeyaan iska diidaan.
Waayo xidigan dhulka ayay galeen filimadiisii badanaa sida Kyon Ki (2005), Shaadi Karke Phas Gaya Yaar (2006), Jaan-E-Mann (2006), Baabul (2006), Salaam-E-Ishq (2007).
Salman oo culees weyn saaran yahay wuxuu dib ugu laabtay inuu la shaqeeyo saaxiibkiis David Dhawan wuxuuna u sameeyay filimkii Partner asiga iyo Govinda filimkan Salman amaan balaaran ayuu ku helay sidoo kalena Super Hit ayuu noqday.
Laakiin Salman markale dhiiqadii uu ku laabtay madaama filimo badan oo xariir ah ay ka hoobteen waxaana ka mid ah Marigold (2007), Saawariya (2007), God Tussi Great Ho (2008) iyo Yuvvraaj (2008).
Khan dhaliil xoogan ayuu la kulmay waxayna dadka qaar ku tilmaameen shaqsi saaxiibtinimada ay kala weyn tahay shaqada waayo filimo badan ee uusan u qalmin ayuu qaatay kuwaas oo sumcadiisa waxyeelo u geesteen!!
Soo Laba Kacleyntii Salman Iyo Bilaabashadii Musalsalka Blockbuster-ka Ah (2009 Ilaa Haatan)
Sanadii 2009 Salman Khan marnaba ma iloobi karo waa markii uu hurdada ka kacay sidoo kalena uu bilaabay inuu madaxa dhulka ka ceshto hada kadibna shaqada uu ka hormariyo saaxiibtinimada.
Khan wuxuu Bollywood-ka u bilaabay waji cusub oo ah sameynta filimada loo yaqaan Masala (waa filim isugu jiro Action, heeso, shactiro iyo dhaqanka Hindiga uusan ka marneyn)
Sidaa darteed filimkii Wanted ee uu Prabhu Deva iska lahaa ayuu la yimid xidigan filimkan waxaaba la isku raacay inuu ahaa midka ka kaliya ee ka run sheegay awooda Salman uu leeyahay.
Waayo Wanted Hit-weyn ayuu noqday sidoo kalena dal iyo dibad filimkan waa laga wada jecleestay xarakada uu Salman 8-sano ka hor ilaa haatan waa mid ay Bollywood-ka iska doon doonaan!!
Waxaad moodaa Khan inuu caro isaga shubay sharafkii iyo maqaamkii uu Wanted ku helay madaama uu ku xijiyay filimo aysan taageerayaashiisa ka helin sidoo kalena guul dareesteen sida Main Aurr Mrs. Khanna, London Dreams iyo Veer.
Laakiin sanadii 2010 ayuu Salman Khan Bollywood-ka boqorkiisa noqday madaama filimkiisii Dabangg uu Blockbuster noqday sidoo kalena hadal heynta filimkan Hindiya min tuulo ilaa magaalo ayay gaartay.
Dabangg wuxuu noqday filimkii ugu weynaa sanadii 2010 asigoo isku darka gudaha iyo daafaha caalamka soo xareeyay 210 Crore waxaa intaas usii dheer Salman aqoonsi caalami ah ayuu filimkan ku helay.
Chulbul Pandey ayaaba loo bixiyay waana magaca uu ku jilay filimka Dabangg xidigan wuxuu ku qaatay atooraha ugu wanaagsan abaal marinta ay bixiso shirkada Screen Awards sidoo kalena Dabangg abaal marinta National Filma Awards waxaa ku qaatay Arbaaz Khan oo qarash gareeye ka ahaa madaama ay dawlada Hindiya u aqoonsatay filimkii ugu madaadalada wacnaa sanadii 2010 dhamaan aflaanta gudaha Hindiya laga sameeyay!
Anupama Chopra oo ah qoraa filimada ka faaloodo kana tirsan shabakada NDTV wuxuu bandhigii Salman ee filimkii Dabangg ku tilmaamay “Waa doorkii noloshiisii ugu wacnaa Salman mana ahan door qof walbo uu heli karo waa door noloshii halmar la helo!!!!”
Salman wuxuu bilaabay ama uu saaxiib la noqday sameynta filimada Blockbuster-ka ah asigoo sanadii 2011 la yimid labadii filim ee Boxoffice-ka gil gileen Ready (Blockbuster) iyo Bodyguard (Blockbuster) weliba isla asiga ayaa noqday atooraha sameeyay filimada ugu lacagta badnaa sanadkaas.
Taageeraha uu gudaha Hindiya ku leeyahay Salman ayaa soo laba jibaar matay midaasna waxay ka caawisay filim walbo ee uu la yimaado in Blockbuster lagu sii tilmaamo asigoo soo bixin!
Khan sanadii 2012 awoodiisii meeshii ugu sareesay ayuu gaarsiiyay madaama filimkiisii Ek Tha Tiger uu Blockbuster noqday weliba filimkan 300 Crore ($45M) ayuu sare u dhaafay lacagaha uu gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka ka keenay markii la isku daray.
Khan waxay ahayd markii ugu horeesay ee uu shirkada Yash Raj Films u sameeyo laakiin hadiyad aysan iloobi karin ayuu siiyay marba hadii Ek Tha Tiger uu aduunyada oo idil kaga yaabsaday.
Sidoo kale Salman dhamaadkii 2012 wuxuu la yimid Dabangg qaybtiisii labaad ileen shacbiyadiisa waa lama taabtaan wuxuuna filimkan noqday Blockbuster weyn inkastoo Dabangg 2 lagu tilmaamay mid aan gaari karin Dabangg qaybtiisii kowaad.
Khan rikoor ayuu sameeyay madaama sedex sano oo isku xigto uu noqday atooraha sameeyo filimka ugu lacagta badan ee Bollywood-ka la imaadaan midaasna waxay ka dhigtay ama uu gaaray darajo ahaan in loogu yeero “Boxoffice King”.
Khan wuxuu bilaabay inuu guushiisa ku raaxeesto sidaa darteed sanadii 2013 wax filim ah ma sameynin taasina waxaa ka niyad jabeen taageerayaashiisa faraha badan ee jeclaa inay sanad walbo xidigan filimkiisa daawadaan waxayna ahayd markii ugu horeesay ee Salman Khan 12-bilood uusan wax filim ah keenin tan iyo markii uu fanka kusoo biiray sanadii 1988!
Sanadii 2014 ayuu Dabangg Khan dib usoo laabtay wuxuuna ku af bilaabay filimkiisii Jai Ho inkastoo filimkan uu guul dhex dhexaad ah gaaray sidoo kalena Semi Hit uu noqday hadana waxaa so af jarmay 5-filim Blockbuster ah oo uu Salman isku xijiyay.
Jai Hao wuxuu noqday filimkiisii ugu horeeyay mudo 5-sano kadib ee Boxoffice-ka guul dhex dhexaad ah ka gaaro inkastoo filimkan uu 100 Crore iyo ka badan gudaha Hindiya kasoo xareeyay.
Bhai asigoo ka hadlaayay hoos u dhicii Jai Hao wuxuu yiri “Jai Ho waa filim guul dareestay marka loo fiiriyo waxa laga filaayay inkastoo 100 Crore uu keenay”
“Boxoffice-ka ma ahan tiro kaftan gasho sidaa darteed Jai Hao waxaa loo asteeyay filim Blockbuster noqonaayo laakiin ma noqonin sidaa darteed waa inaan horey uga socdaa gaabiskii igu yimid anigoo qofna farta ku fiiqeyn”
Hadalka Salman dadka filimada ka faaloodo waxay u fasireen in xidigan uu dhaliilay (Production Value) ama sida loo sameeyay filimka Jai Hao oo uu walaalkiis Sohail Khan laakiin Salman marnaba qoyskiisa ma eedeeyo madaama uu siweyn u jecel yahay.
Sidii joogtada u ahayd Ciidul Fitrigii sanadii 2014 Salman Khan wuu soo laba kacleeyay wuxuuna la yimid filimkii Kick ee uu iska lahaa Sajid Nadiadwala.
Kick wuxuu noqday filimkii ugu horeeyay ee Salman hogaamiyaha ka yahay kaasi oo 200 Crore gudaha Hindiya kasoo xareeyo sidoo kalena astaantii lagu yaqiinay ayuu Salman dib usoo ceshtay madaama uu Blockbuster noqday filimkan.
Sanadkii 2015 Salman Khan wuxuuba noqday atoore caalami ah madaama filimkiisii Bajrangi Bhaijaan uu gudaha iyo dibada rikoor caalami ah ka dhigay.
Bajrangi Bhaijaan wuxuu noqday filimkii labaad ee 300 Crore gudaha Hindiya kasoo xareeyo sidoo kalena filimka loogu daawasho badan yahay 14-sano ee ugu dambeesay Bollywood-ka ayuu noqday.
Bajrangi Bhaijaan darajo ahaan waa All Time Blockbuster waxayna dadka filimada ka faaloodo ku tilmaameen bandhiga Salman inuu yahay midkii ugu wanaagsanaa ee uu ebid sameeyo.
Sido kale sanadkii 2016 wuxuu la yimid Sallu filmka Blockbusterka weyn noqday ee Sultan kaaso noqday filmka labaad ee sanadkaan lacaga ugu badan gudaha India kasoo xareeyo maadama darajada 300 Crore gaaray.
Ugu dambeyn Salman sanadkii 2017 musasalkiisa taxanaha ahaa hakad ayaa galay maadama filmkiisa Tubelight ka guuldarestay oo uu noqday Below Average balse filmkisa Tiger Zinda Hai oo wacdaro taariikhi ah kadhigaya Box-officeka ayaa noqday filmkiisa lacagaha ugu badan soo xareeyo waxuuna natiijo ahaan noqday Blockbuster weyn.
Salman Khan ciidul fidriga sanadkan waxuu la yimid filmkii fashilka weyn kudhacay ee Race 3 kaaso guul dhex dhexaad ah gaaray balse ciidul fitriga sanadka dambe 2019 waxuu la imaan doonaa Bharat oo kalsooni weyn lagu qabo.
Salman Khan Iyo Shaqsiyaadka Uu Ka Caawiyay Inay Bollywood-ka Kusoo Biiraan
Salman Khan shaqsiyaad badan ayuu ku dhiiri galiyay inay shirkada Bollywood-ka kusoo biiraan siweyn ayuu u gacan qabtay talo ahaan, niyad ahaan, dhaqaalo ahaan iyo hogaan ahaan.
Xidigaha haatan Bollywood-ka ku faanaan Hrithik Roshan iyo Arjun Kapoor isaga ayaa ku dhiiri galiyay inay jirkooda dhisaan marwalbana ku dadaalaan inay sameyn karaan hadba doorkii looga baahdo, dabcan Hrithik Roshan marar badan ayuu meel fagaaro ah ka sheegay abaalka uu Salman u haayo.
Salman wuxuu caawinaad dheeri ah u sameeyay Director Saawan Kumar Tak asigoo filimkiisii Saawan… The Love Season ugu jilay lacag la’aan weliba wixii laga helay isla Director-ka ayu Salman uu dhaafay.
Salman asiga ayaa ka talo bixiyay sidoo kalena Bollywood-ka kusoo daraan labada Muusiigiiste ee sida weyn looga dambeeyo Himesh Reshammiya iyo Sajid–Wajid.
Bhai wuxuu garab siiyay filim sameeye Sanjay Leela Bhansali markii uu Bollywood-ka ku cusbaa asigoo ka caawiyay filimkiisii kowaad Khamoshi (1996) weliba Manisha iyo Nana Patekar oo filimkan wax ka jileen Salman ayaa ku booriyay inay ka qayb qaataan sidoo kalena Salman wuxuu Sanjay Leela Bhansali ka caawiyay sameyntii filimkiisii labaad Hum Dil De Chuke Sanam.
Salman wuxuu caawinaad u fidiyay sidoo kalena uu bad baadiyay mustaqbalka dhanka fanka ee atooraha caanka ah Govinda madaama uu boos dhameestiran ka siiyay Govinda filimkii Partner ee uu iska lahaa David Dhawan.
Salman Khan sidoo kalena xidiga loo yaqaan Mohnish Bahl isaga ayaa Bollywood-ka kusoo daray madaama uu ka talo bixiyay sidoo kalena uu kala hadlay Director Sooraj Bartajya inuu filimkii Maine Pyar Kiya sidoo kalena filimkii Baaghi Mohnish Behl isla Salman ayaa kusoo daray.
Salman caawinaada uu Mohnish Behl u sameeyay intaas kuma eko markii uu xidigan atoore buuxo noqon waayay sidoo kalena Bollywood-ka ku fashilmi rabay wuxuu kusoo daray qaar ka mid ah filimadiisii Hum Aapke Hain Koun..!, Hum Saath-Saath Hain iyo Jai Ho oo uu dhawaan la jilay.
Sidoo kale Salman Khan wuxuu caawiyay Ravi Kishan oo isagana Bollywood-ka kasii bixi rabay inuu sanadii 2003 filimkiisii Tere Naam boos ka siiyay.
Salman Khan qalbigiisa nadiifka ah iyo naxariistiisa xad dhaafka ah intaas laguma soo koobi karo wuxuu xidigan dhanka fanka ka caawiyay Aishwarya Rai iyo Katrina Kaif asigoo marwalbo xidigan ka talo bixin jiray filimada ay saxiixan jireen waxaana la dhihi karaa madaxiisa ayay xidigo awood badan ku noqdeen.
Salman Khan sidoo kale wuxuu caawiyay Soonu Sood oo dhibaato xoogan soo gaartay sanadii 2010 xili uu cayaarta Cricket-ka cayaarayay ayuu ku dhaawacmay wuxuuna waayay xidigan qof filim u dhiibto laakiin Salman ayaa ka cosaday Mahesh Manjrekar in filimkiisii Marathi-ga ahaa Shikshanachya Aaicha Gho inuu Sonu Sood hogaamiyo ka dhigo nasiib Sonu filimkii ayaa loo dhiibay wuxuu noqday Hit weyn wixii markaas ka dambeeyayna atoore isku filan ayuu noqday.
Bhai dhawan wuxuu soo caan bixiyay gabadha Suniel Shetty ee lagu magacaabo Athiya Shetty iyo wiilka Aditya Pancholi ee lagu magacaabo Sooraj Pancholi waxaana filimkooda Hero la daawaday sanadkii 2015 kaaso uu Sallu maalgaliye ka ahaa.
Mustaqbalka dhow Salman Khan wuxuu filimo u qarash gareen doonaa oo uu soo caan bixin doonaa wiilka lagu magacaabo Rinzing waxaana dhalay laadarka caanka ah Danny Denzongpa.
Sidoo kale Salman Khan wuxuu filim u qarash gareen doonaa ee uu dadka bari doonaa Ali waxaana aabo u ah Raza Murad oo oo ay Soomaalidu u taqaan (Codeey).
Bhai waxaa intaas usii dheer in Ilaaliyihiisa ama waardiyahiisa qaaska ah ee lagu magacaabo Shera wiilkiisa inuu mustaqbalka dhow Bollywood-ka kusoo dari doono si uu Shera ugu abaal gudo madaama uu mudo dheer Bodyguard u yahay.
Ugu dambeyntii Salman wuxuu fanka kusoo celiyay Armaan Kohli oo hawada ka baxay wuxuuna xidigan boos fiican ka siiyay filimkiisa Prem Ratan Dhan Payo ee sanadii 2015 la daawaday Hit-ka weyna noqday.
Bhai Iyo Hawlaha Samafalka Ah Ee Qabto Xidigan:
Salman Khan noloshiisa iyo kalam haraan wax qabashada dadka dhibaateen xitaa markii uu ahaa atoore fanka ku cusub wuu naxariis badnaa.
Balse hawshiisa mutadawacnimo wuxuu u sameeyay ururk maxali ah oo lagu magacaabo Being Human si waxqabadkiisa uu u noqdo midka dadka dhan wada gaaro.
Salman Khan iyo Being Human kalam haraan wuxuu naxariistiisa ku talaalay inta badan xidigaha Bollywood-ka ee qalbiga jilicnsan leh kuwaas oo siweyn ugu taageereen hal abuurkisa.
Being Human waxay caawisaa dadka dhibaateen sidoo kalena dadka faqiirka ah ganacsi iyo ilo dhaqaale ayay u sameysaa sidoo kalena gurmad deg deg ah ayay bixisaa hadii ay masiibo dabiici ah ama mid bini aadamka sameeyay ay gudaha Hindiya ka dhacdo.
Khan bishii Janaayo 2012 wuxuu bixiyay 4 Crore ($60,000) oo lagu soo daayay 400 oo maxaabiis kuwaas oo ku jireen 63-xabsi oo ku yaalo Uttar Pradesh waxaana caawisay hay’adiisa maxaliga ah Being Human.
Khan wuxuu si joogto ah u caawiyaa caruurta iyo dadka waa weyn ee cudurka Cancer-ka asiibo asigoo weliba ku bixiyo lacago aad u fara badan daaweyntooda.
Bishii July 2015 Salman wuxuu si rasmi ah u sheegay qayb ka mid ah daqliga filimkiisa Bajrangi Bhaijaan kasoo galo inuu ugu deeqi doono dadka beeraleyda ah ee deymaha faraha badan lagu leeyahay kuwaas oo ku nool gobolka Mahrashtra.
Super Salman Iyo Noloshiisa Gaarka Ah:
Khan wuxuu aqal weyn oo dhameestiran ku leeyahay xaafada Bandra ee magaalada Mumbai waana halkii uu kusoo bar baaray xidigan.
Salman wuxuu leeyahay beer 150-acre cabirkeeda yahay oo ku taalo Panvel waa dhul weyn oo beero kala duwan ku yaaaliin sidoo kalena barkad lagu qubeesto iyo meel Gym-ka ama jirdhiska lagu sameeyo ayaa ku taalo waana halka uu xidigan ugu jecel yahay inuu xiliga fasaxa ku nasto.
Inkastoo uu Salman 49-jir yahay hadana waligiis ma guursanin balse marwalbo xiiradada jecel ee uu sameeyo xidigan waa mid soo jiito saxaafada iyo taageerayaashiisa kala duwan.
Sanadii 1999 Salman wuxuu xiriir jeceyl la wadaagay Aishwarya Rai balse xiriirkiisa wuxuu ka socon waayay dhanka saxaafada oo marwalbo baahin jirtay qilaafkii soo kala dhex galo ama xurguftii dhex marto taasina waxay dhaxal siisay in sanadii 2001 xiriirkoodii bur bur ku imaado.
Khan sidoo kale wuxuu xiriir adag la dhisay Katrina Kaif inkastoo labadan xidig xili ay isla socdeen saxaafada ka qarin jireen jeceylkoodii.
Hadana sanadii 2011 Katrina Kaif waxay saxaafada u sheegtay in iyada iyo Salman Khan xiriir adag sanao badan ka dhaxeeyay laakiin sanadii 2010 ay kala hareen weliba xiriirkooda labada dhinac ayaa isla garteen inay soo afjaraan muran la’aan iyo buuq la’aan inkastoo sababta ilaa haatan la sheegin.
Salman bilawgii 90-kii wuxuu xiriir jeceyl oo kala duwan lasoo wadaagay atirishooyinka kala ah Sangeeta Bijlani iyo Somy Ali balse mid walbo waqtigii uu lasoo qaatay natiijo la’aan ayuu dhamaday.
Salman Khan Iyo Saxaafada Caalamka Aqoonsiga Uu Ka Helay:
Sanadii 2004 Salman Khan waxaa loo aqoonsaday ninka 7-aad ee caalamka ugu muuqaalka qurxoon waxaana u codeesay majalada People Magazine ee dalka Mareekanka kasoo baxdo.
Sanadii 2008 waxaa taalo muuqaalkiisa u eg looga sameeyay madxafka caanka ah ee Madame Tussauds kuna yaalo London sidoo kalena 2012 Madame Tussauds madxafka ay New York ku leedahay ayaa la dhigay taalo kale oo muuqaalkiisa ah.
Sanadii 2010 majalada People Magazine qaybteeda Hindiya waxay ku tilmaantay ninka ugu soo jiidashada badan ee caalamkan ku nool!
Sanadihii 2011, 2012 iyo 2013 waxay Times of India u dooratay shaqsiga loogu jecel yahay gudaha Hindiya sidoo kalena bishii August 2013 waxaa loo doortay inuu yahay shaqsiga ugu caansan ee reer Hindiya kaasi oo loogu baadi goob badan yahay macluumaadkiisa barta Internet-ka!
Khan shirkada Forbes waxay u dooratay dooratay 2014 shaqsiga ugu caansan sidoo kalena ugu badan soo galay jilaayaasha Bollywoodka.
Sidoo kalena Forbes liiska ay soo saartay 100-ka shaqsi ee caalamka ugu caansan ee daqliga ugu badan soo galay sanadkan 2015 kaalinta 71-aad ayuu ka galay wuxuuna Khan kasbaday daqli gaarayo $33.5 million.
Sallu Iyo Muranada Kala Duwan Ee Noloshiisa Hareeyeen:
Khan noloshiisa dhibaatooyin kala duwan ayaa hareeyeen kuwaas oo dhaliyeen muran badan asigana u diideen inuu nasto waxaana ka mid ah:
Khan 5-sano oo xarig ayaa lagu xukumay 6 bishii May ee isla sanadkan kadib markii maxkamada Maharashtra ay ku riday xukunkan kaasi oo guud ahaan daafaha caalamka laga wada dareemay hadal heyntiisa.
Khan waxaa loo heestaa inuu baabuur ku dilay hal qof sidoo kalena 4-kale ku dhaawacay dad darbi jiif ah sanadii 2002 September 2002 xili uu habeen xili dambe ah baabuurkiisa dadkan ku jiiray
Salman ayaa ku guuleestay inuusan xasbi galin asigoo ka dacwooda maxkamada sare ee Mumbai ilaa haatana damaanad ayuu banaanka ku joogaa welina dacwadii kiiskiisa ayaa socoto.
Dhinaca kale 17 February 2006 Salman waxaa lagu xukumay 1-sano oo xarig ah kadib markii lagu cadeeyay inuu toogasho ku dilay ugaarta deerta loo yaqaan, balse xabsi ma uusan galin xukunkiina maxkamada sare ayaa celisay.
10-kii April 2006 Salman waxaa lagu xukumat 5-sano oo xarig ah wuxuuna magaalada Jaidpur ku sugnaa ilaa 13-kii April xabsi ku yaalo.
Markii uu damaanad buuxdo helay sidoo kalena Salman uu sanado badan banaanka si xor ah ku joogay hadana maxkamada sare ee gobolka Rajasthan ayaa amar ku bixisay in xukunkii Salman dib loo soo celiyo 24-kii July 2012.
9 July 2014 maxkamada sare waxay Salman ku amartay inuu dib ugu soo laabto Rajasthan welina uu taagan yahay xukunkii lagu riday oo ilaa haatana dawcadii ugaartii uu dilay waa mid weli taagan madama laga diidan yahay inuu lacago ku badasho xukunkii lagu riday,
Sido kale 5 July 2016 markale ayaa xidigaan maxkamada looga yeeray ayadoo dambigan cadeemo horleh loo keenay maxkamada sare waxayna caqabad ku noqotay in kiiskaan lasoo afjaro Sallu na sidaa u badbaado balse maxkamada ayaa ka diiday in arinkaan wado kale loo yeelo inkastoo Sallu hader damiin ku joogo.
Ugu dambeyn sanadkaan 2018 ayaa Khan lagu xukumay 5 sano xarig ah kiiski ugaarta deerta mudo 2 maalmod ayuuna xabsiga Jodhpur dhex jiiftay inkastoo markii dambe damaanad lagu soo daayey walina kiiskan wuu socdaa iyadoo Sallu uu racfaan qaatay doodana dib loo furi doono.
Waxaa Aqrisay 1,316